Ry olona tsy matoky tena - Inona no vokany eo amin'ny fiainantsika? | Bezzia
Olona tsy atokisana manana izany fahatsapana izany izy ireo fa tsy afaka matoky olona, ​​na saika na iza na iza. Miresaka fahatsapana na fahatsapana ratsy izay mety hisy fiatraikany amin'ny fiainantsika saika tsy fanahy iniana isika. Satria marina fa tsy zavatra azontsika fehezina amin'ny fotoana rehetra izany.
Izany no antony tsy maintsy hidirantsika lalina kokoa amin'ity fahatsapana ity ankehitriny amin'ny zavatra mety hanan-kery eo amintsika ho olona tsy matoky tena ary mieritreritra ny hafa koa. Izany rehetra izany sy ny maro hafa koa hahafahana mahatakatra ny iray amin'ireo fahatsapana izay sendra antsika isan'andro. Izany koa ve no mitranga aminao?
1 Inona no mitranga rehefa tena tsy matoky tena ny olona iray
2 Inona no ao ambadiky ny olona tsy atokisana
3 Ahoana ny fomba hanampiana olona tsy matoky tena
Inona no mitranga rehefa tena tsy matoky tena ny olona iray
Raha olona tsy matoky isika dia satria io fahatokiana tokony hisy eo amintsika io dia manana laharana manify. Ka raha mankany amintsika ny tsy fahatokisana dia mety ho olana amin'ny fametrahana fifandraisana amin'ny hafa izany. Raha any amin'ny hafa izany dia mitovy ihany. Satria ireo fifandraisana ireo dia tsy hamboarina amin'ny fototra mafy orina satria hisy aloky ny fisalasalana foana. Noho izany, tsy mora ny miaina amin'ny tsy fahatokisana lehibe amin'ny olona amin'ny ankapobeny. Satria, amin'ny tranga henjana kokoa, azontsika atao koa ny misalasala ny amin'ireo olona izay naneho ny fitiavany tsy misy fepetra antsika. Satria ny saina, na dia mahery vaika rehetra aza izy io, dia hampino antsika fa tsy mendrika ny zavatra manodidina antsika isika.
Tsarovy izany olona tsy mahatoky no mijaly mafy. Hanadihady toe-javatra, resaka ary fihetsika mihitsy aza izy amin'ny fotoana rehetra ohatrinona no lazain'izy ireo momba anao. Ka io fahatsapana io dia miteraka fanairana, toetry ny adin-tsaina mihoatra ny fitohizan'ny, izay manamarika azy ireo. Ho an'ny maro dia karazana akorandriaka noforonin'izy ireo mba tsy hijaly.
Inona no ao ambadiky ny olona tsy atokisana
Amin'ny lafiny iray dia mety misy olona iray izay naratra teo aloha. Noho izany, rehefa miangona ny simba dia sarotra ny afaka mitoky tanteraka indray. Misy foana ny fisalasalana, ny tsy fahatokisana ary raha tsy miasa ianao dia hitombo. Saingy etsy ankilany dia tsy misy foana ny fahavoazana fa ny tsy fahatokisana tsotra izao, fahatsapana ny tsy fahatokisana tanteraka an'ireo olona manodidina antsika. Izany dia noho io fahatsapana io izay misarika antsika hiverina fa tsy afaka mandroso. Noho izany, azontsika atao ny milaza fa ny olona tsy matoky tena noho izy ireo nisafidy, fa noho izy ireo manana tahotra manakana azy ireo tsy hahita ny ilany hafa amin'ny farantsakely.
Ahoana ny fomba hanampiana olona tsy matoky tena
Mba hanampiana anao hiala amin'izany loop izany, tsy misy toa ny olona mazava eo alohan'izy ireo. Izany hoe tsy misy lalana mihodina, milaza ny zava-drehetra ary maneho ny lafy tsara indrindra ananantsika. Ho fanampin'izay, mila miezaka ianao mba tsy hiaro tena ary hihaino hatrany izay lazain'ny olon-kafa aminao. Ka tsy tokony hitsara azy ireo ho priori izy ireo fa miandry hahita ny zava-misy ary hanana faharetana kely. Io dia ahafahanay manome anao fotoana fohy hahafahanao mampiseho aminay fa tena hisy ny fifampatokisana.
Tsy tokony hanao idealista na hanao an'izany amintsika isika. Satria samy manao fahadisoana ny tsirairay, saingy indraindray saika tsy tsapany izany na lesoka madinidinika. Noho izany dia mila mandefitra olona tsy azo itokisana ianao na dia kely aza. Torohevitra iray azo ampiharina koa ny tokony hampandehanan'izy ireo kokoa, tsy hamerana fetra, fa hisokatra kokoa nefa tsy hitaky be loatra ny fangatahana. Mba hiteraka fahatokisana bebe kokoa amin'ny olona iray izay tsy matoky tena dia mila manao zavatra bebe kokoa ianao ary manome zavatra bebe kokoa noho ny teny.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » Psychology sy mpivady » Psychology » Olona tsy atokisana: Inona no fiantraikan'izany eo amin'ny fiainantsika?